Akhriso:Taariikh Nololeedka qoraagii caanka ahaa Cabdiraxman Cali Waabberi - Awdinle Online
Abwaan Cabdiraxmaan Waberi uma soo jiidin magac iyo caannimo dalka uu ka dhashay ee Jabuuti oo qura balse wuxu wuxuu magac iyo muuno usoo jiiday dadka Af Soomaaliga ku hadla oo idil.
Wuxuu adduunka baray qiimaha iyo qaddarinta ay mudan yihiin dadka reer guuraaga ah ee xooladhaqatada ah oo suugaan, murti, iyo adkaysiba hodan ku ah. Sidaasoo kale Dalka Faransiiska waxuu u haystaa inuu qiima weyn ku leeyahay dalkaas oo u dalshada ku leeyahay.
Cabdiraxman Waberi wuxuu nasiib u yeeshay inuu helo abaalmarinno fara badan. Kuwaas waxaa ka mid ah Grand prix littéraire d’Afrique noire.
Qoraalladiis aad ayay u fara badan yihiin, soo koobiddodana waa hawl aad u weyn. Buuggiisi ugu horreeyay wuxuu akhristayaasha soo gaaray 1994, kaasoo ahaa sheekada la magacbaxday: “Le Pays Sans Ombre” (Tarjumada Ingiriiska: Land without Shadow), “Dal aan Hoos lehayn” oo Jabuuti la xiriira. Buuggan waxaa arartiisa qoray Nuruddiin Faarax. Intaan ka warqabno buuggiisa ugu dambeeyay wuxuu ahaa:
Runtii buugaagtiisa aad ayay u fara badan yihiin sidaas daraaddeed waxaan ka xusaynaa qaar keliya. Qaar ka mid aha buugaagtiisana waxay Awdinle Online usoo bandhigi doontaa akhristayaasheeda Faalloyin lagu falanqaynaayo qoraalladiisa.
Previous articleSafiirka Qatar ee Soomaaliya oo gaaray Kismaayo
Next articleFaaf faahin ka soo baxaysa Qarax lala eegtay dad shacab ah